ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် အမှန်တရားတစ်ခု – Gentleman Magazine
ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် အမှန်တရားတစ်ခု (Zawgyi)
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆလွဲမှားတတ်ကြပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးအများစုက ချစ်သူရည်းစားရပြီဆိုရင် သူတို့ပျော်ရွှင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ ထင်မှတ်ကြပါတယ်။ ပြောရမှာစိတ်မကောင်းပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်လာမှာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က ရှင်းပြခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ချစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေဟာလည်း စိတ်ပျက်စရာတွေ ဖြစ်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောနေလို့ သင်နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် မေးခွန်းတစ်ခု မေးချင်ပါတယ်။
သင်ဖက်က သဘောကျပြီး ဖူးစာဆုံဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေတာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား ??
ကျွန်တော်ကတော့ အများကြီးကြုံဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတာ အဖြေမရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အပြောင်းအလဲများဖြစ်မလားလို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီလိုမျိုးတွေချည်းပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားကြည့်ခဲ့မိတယ်။
ကျွန်တော်ဘာကို တွေ့ရှိခဲ့လဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးပါမယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ သင်နဲ့အတူ ဘယ်လိုဘ၀မျိုးကို သူမ ရရှိနိုင်မလဲဆိုတာ မသိလိုက်မသိဘာသာ အကဲဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်နဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာ သူမအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ဖြစ်မလား ဒါမှမဟုတ် ပူဆွေးသောကဖြစ်စရာတွေများ ကြုံရမလား တွေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်က လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်တာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ချစ်သူရည်းစားရခြင်းရဲ့ အကျည်းတန်တဲ့အမှန်တရား တစ်ခုကို ကျွန်တော်ပြောပြရပါလိမ့်မယ်။
အရင်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ထူးထူးခြားခြားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ၀ါသနာရယ်လို့လည်း သိပ်မရှိသလို ခင်မင်စရာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရယ်လို့လည်း သိပ်မများလှပါဘူး။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ သဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီဆိုရင် စွဲလန်းမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာကိုပဲ အခြေခံတွေးမိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဖြေက အငြင်းခံရတာပါပဲ။
အခု ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကို ငြင်းလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်း အပြစ်မတင်ချင်တော့ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကများ ဒီလိုပျင်းစရာကောင်းတဲ့လူမျိုးနဲ့ တွဲချင်ပါ့မလဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် ချစ်သူရည်းစားရဖို့ကြိုးစားနေတာကို ခေတ္တရပ်နားလိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Gym သွားကစားတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်တယ်။ ၀ါသနာအသစ်တွေ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်တယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုသဘောကျလာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အယူအဆတွေကို ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာသလို စိတ်ဝင်စားပျော်ရွှင်ရတာတွေကိုလည်း ပိုလုပ်ဖြစ်လာတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေက ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်လေ။
ဒီလိုပြောတာက ရယ်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်မဟုတ်လား ??
တကယ်တော့ သင့်အနေနဲ့ ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်ပီသလာလေလေ၊ စစ်မှန်ပြည့်စုံတဲ့ အချစ်ရေးရာတွေကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ချေများလေပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် ပြည့်ဝလာအောင် ပြင်ဆင်ပါ။ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်လာဖို့က မဝေးပါဘူး။
ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့ နှငျးဆီခိုငျ အမှနျတရားတဈခု (Unicode)
ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး အယူအဆလှဲမှားတတျကွပါတယျ။ ယောင်ျကြားလေးအမြားစုက ခဈြသူရညျးစားရပွီဆိုရငျ သူတို့ပြျောရှငျကွရလိမျ့မယျလို့ ထငျမှတျကွပါတယျ။ ပွောရမှာစိတျမကောငျးပမေယျ့ ဒီလိုဖွဈလာမှာ လုံးဝမဟုတျပါဘူး။ ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ပတျသကျပွီး ကြှနျတေျာ့ကို တဈယောကျယောကျက ရှငျးပွခဲ့မယျဆိုရငျ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ခဈြမှုရေးရာကိစ်စတှဟောလညျး စိတျပကျြစရာတှေ ဖွဈခဲ့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုပွောနလေို့ သငျနားလညျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောပွောတဲ့ကိစ်စကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သကျသပွေနိုငျဖို့အတှကျ မေးခှနျးတဈခု မေးခငျြပါတယျ။
သငျဖကျက သဘောကပြွီး ဖူးစာဆုံဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ အဆငျမပွတောမြိုး ဖွဈဖူးပါသလား ??
ကြှနျတျောကတော့ အမြားကွီးကွုံဖူးပါတယျ။ ပွီးတော့ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာတာ အဖွမေရှာနိုငျခဲ့ပါဘူး။ အပွောငျးအလဲမြားဖွဈမလားလို့ မြှျောလငျ့ခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒီလိုမြိုးတှခေညျြးပဲ တှခေဲ့ရပါတယျ။ ဒီတော့ ကြှနျတျော အခြိနျယူပွီး စဉျးစားကွညျ့ခဲ့မိတယျ။
ကြှနျတျောဘာကို တှရှေိ့ခဲ့လဲဆိုတာကို ဝေမြှပေးပါမယျ။ မိနျးကလေးတဈယောကျက သငျ့ကို ပထမဆုံးအကွိမျတှဆေုံ့တဲ့အခါမှာ သငျနဲ့အတူ ဘယျလိုဘ၀မြိုးကို သူမ ရရှိနိုငျမလဲဆိုတာ မသိလိုကျမသိဘာသာ အကဲဖွတျလရှေိ့ပါတယျ။ သငျနဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာ သူမအတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာတှေ ဖွဈမလား ဒါမှမဟုတျ ပူဆှေးသောကဖွဈစရာတှမြေား ကွုံရမလား တှေးပါလိမျ့မယျ။
ဒီအခကျြက လကျခံနိုငျဖို့ ခကျတာ အမှနျပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခဈြသူရညျးစားရခွငျးရဲ့ အကညျြးတနျတဲ့အမှနျတရား တဈခုကို ကြှနျတျောပွောပွရပါလိမျ့မယျ။
အရငျတုနျးကဆိုရငျ ကြှနျတျောနဲ့ပတျသကျပွီး သိပျထူးထူးခွားခွားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဝါသနာရယျလို့လညျး သိပျမရှိသလို ခငျမငျစရာ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးရယျလို့လညျး သိပျမမြားလှပါဘူး။ ကြှနျတျောအနနေဲ့ သဘောကတြဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျကို တှပွေီ့ဆိုရငျ စှဲလနျးမိတာတော့ အမှနျပါပဲ။ ဒီအခြိနျမြိုးမှာ သူတို့ ကြှနျတေျာ့ကို ပွနျကွိုကျမကွိုကျဆိုတာကိုပဲ အခွခေံတှေးမိပါတယျ။ နောကျဆုံးအဖွကေ အငွငျးခံရတာပါပဲ။
အခု ပွနျတှေးကွညျ့မယျဆိုရငျ ကြှနျတျောကို ငွငျးလိုကျတဲ့မိနျးကလေးတှကေိုလညျး အပွဈမတငျခငျြတော့ပါဘူး။ ဟုတျပါတယျ။ ဘယျသူကမြား ဒီလိုပငျြးစရာကောငျးတဲ့လူမြိုးနဲ့ တှဲခငျြပါ့မလဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျော ခဈြသူရညျးစားရဖို့ကွိုးစားနတောကို ခတ်ေတရပျနားလိုကျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အာရုံစိုကျခဲ့ပါတယျ။ Gym သှားကစားတယျ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ စာအုပျတှဖေတျတယျ။ ဝါသနာအသဈတှေ လကေ့ငျြ့ပြိုးထောငျတယျ။ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခု ရောကျလာတဲ့အခါမှာ ကြှနျတျော ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပိုသဘောကလြာခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အယူအဆတှကေို ပိုတနျဖိုးထားတတျလာသလို စိတျဝငျစားပြျောရှငျရတာတှကေိုလညျး ပိုလုပျဖွဈလာတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ ထူးဆနျးတာတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ။ မိနျးကလေးတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို ပိုပွီးစိတျဝငျစားလာကွတယျလေ။
ဒီလိုပွောတာက ရယျစရာကောငျးတယျလို့ ထငျတယျမဟုတျလား ??
တကယျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ယောင်ျကြားကောငျးတဈယောကျပီသလာလလေေ၊ စဈမှနျပွညျ့စုံတဲ့ အခဈြရေးရာတှကေို ကွုံတှရေ့နိုငျခမြေားလပေါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကိုယျသငျ ပွညျ့ဝလာအောငျ ပွငျဆငျပါ။ ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့ နှငျးဆီခိုငျဖွဈလာဖို့က မဝေးပါဘူး။
Previous: အမျိုးသားတိုင်းအတွက် ဘ၀အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၅ ခု
Next: တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ နှစ်ဆတိုးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၅ ခု